DUBBII HAALAAN KAN HIN BEEKNEE, ITTI HIMANUU HIN GALUUF !!!! « QEERROO
April 6, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Eeyyama Tigrootaa malee, Lammaa Magarsaa waa jedha jettanni warri yaaddan dogoggora gudaa gotan. Lamma Magarsa cannot say a word against TPLF without a permission from them
Waggoota 150 oliif Gabrummaa jala jirra. Bilisummaan jiraachuu irra, Gabrummaa jalatti waa hedduu baratan. Warri Gabrummaa jala turanii fi jiran, hadhaa gabrummaa tokkummaan hadheeffatanii, mi’aa Bilisummaa waliin dhandhamaa jiran. Nuuti garuu hadhaa Gabrummaa kana wal qixa hadheeffachaa hin jirru. Kanaaf bakka sagal dhaabbannee ija walitti baafna. Waan nu ilaallatuu fi nu hin ilaallannee wallaallee, wal qoccolla. Akka nama tokkotti Kan of hin bilisomsinee , Bilisummaa sabaaf hin falmuu. Warri Bilisummaa ofii hin mirkaneessinee, , Waa gaafa ho’iitu, Bilisummaan boruu taati jedhanii fiiganii itti seenan. imalli bilisummaa yeroo dheerattu ammoo keessaa ba’anii, ykn ganee, ykn moggaa dhaabbatee qeeqaa fi xiinxala eegala. Namni Bilisummaa barbaaduu , jalqaba ofii isaa qaamaa qalbii bilisoomu isa barbaachisa. Raajiin Oromoota keenya keessatti argaa jirru garuu , kanarra taree OF-nama jibbisiisa. inni Gabrummaa jibbee, qabsaa’een Ummata kiyya bilisoomsaa jedhee of kenna. Inni kaan ammoo , qabeenyaa saammachuu fi nagaan ba’ee galuu ilaalee bilisummaa qabnaa jedha. Inni kaan ammoo, biyya alaa ba’uu isaa fi wayyaanee jalatti gabroomuu jalaa akka baraarameetti of ilaalee, amala habashootaan lammaaffaa gabroomee, obboleessa isaa waliin dhaabbachuu dadhabee kachachala.
Qabsoon Oromoo addatti, baroota dhihoo kaasee waan raajii hedduu nu argisiisaa jiraa. Xiqqaan guddatee , guddaan salphatee nu argisiisee jira. Jabaan laafatee, laafaan jabaatee argineerra. ABOn bifa hedduun muuxatee ol ba’aa jiraachuu fi toftaan diinaa ABO kuffisuu fi booji’uu bifa adda addaan nu argisiisee jira. Diinni guyyaa fi galgala ABOn diina kiyya innikkaadhaa jedhee ifatti dubbataa wayita jirutti, warri ABO kiisha isaanii godhachuuf yaalanii dadhaban, hadhaa qabsoo dandamachuu dadhabanii karaa qaxxaamuraa yaalanii kufan, ABO wayittu hin jirtuu jedhanii wayyaanee gadi yennaa ta’anis taajjabneerra. OPDOn mataa nu martee bifa biraan qabsoo Oromoo dhuunfachuuf yeroo tirtirtuus taajjabneerra. Yoo lubbuun jiraanneef waa hedduu arguuf teenya. GARUU DHUGAAN BAKKA ISHEE HIN HANQATTU !!!
Qabxii kana irratti yaada qabatamaa waliin, gaafa yeroon isaa ga’uu dhiheessuun kiyya hin hafu. Har’aa garuu, yaadootuma Afarfaman tokko tokkof yaada kiyya gaggabaabsee kennuun barbaade.
Adeemasa wayyaanee kana bifa lamaaniin ilaala. 1-1, wayyaaneen kubbaaniyaa kana ilmaanuma Oromoof gadhiiftii jedhee hin yaadu. humna keessaa qabaachuu malti . kun taanaan waan ta’uu danda’uun kaa’aa. Sheerii isaa ofii keessaa qabu. Ilmaan Oromoo keessaa akka qabaatanis taasifamaa jira. Hojii kana irratti ammoo BAANKII OROMIYAA FI AWAASHI qofa keessattti sheerii akka gurguramu taasifamaa jira. Baasii kana irra kanneen hojjatan hundallee ilmaan Oromoo gochuu danda’uu. Kana hundaa ega xumuranii booda, harki wayyaanee keessa akka jiru dubbachiisuu. Isa booda Qeerroon tarkaanfii akka irratti fudhatu taasisanii, Qeerroo fi Ilmaan Oromoo warra sheerii jiruu fi carraa hojii argatee walitti buusuu danda’uu jedheen yaada.
1-2,ODAA BUS kana, dantaa ilmaan Oromoo akka keessa jiraatu godhanii, dhuma irra ofiima isaanii qeerroo fakkaatanii BAASii kana irratti tarkaanfii fudhatanii , SALAM bus gumaa ba’uu fi ammas qeerroo rakkoo galchuu danda’uu jedheen yaada.
Namni keenya haasaa Pirazadantii Oromiyaa irratti amma qalbii fi fedhii isaa dubbateera. Dubbataas jiraa. Namni keenya yeroo tokko tokko Titiisa irraa damma eeguu eegalee ? jedhee of gaafadha. akka Kiyyatti Pirazadantoota wayyaanee Oromiyaa irratti muudaman sagal keessaa kan akka Hasan Alii dubbii beeku hin jiru. waan ummata keessa jirullee dubbata. Wayyaaneen Pirazadantoota kana dabareen leenjiftee keewwatti. Amantiin, Godinaan adda baafachaa keessi. Haasaa Lammaa Magarsaa kana warri faarsuu barbaadanii, warra kaleessaa irraa hin barannee qofaadha. Waan inni dubbatee dhugaa ta’uu kan mirkaneessinuu yoo hojiin hiikeedhaa jedhanii kanneen dubbatanis sirri miti. maalirraa maal eegna ? hayyama wayyaanee malee Lammaan kun dhufee???? ? ykn muudamee ? warri kanaan dura turan, haasaa amma isaa dhadhabaniitii. ? dhugaan jiru hunduu waan ummata keessa jiru ni dubbatu. Kan Lammaa adda kan taasisee, haasaa isaatuu adda ta’ee ykn qalbii bilchaataa ta’uu irraa osoo hin taanee, haasaa akkasii waggaa 25f isaan irraa dhageenyee waan hin beekneef qofaadha. Yeroo isaatuu akka dubbatan taasisee. Haasaa Fincila Ummati Oromoo gaggeessaa jiruu fi gaaffii gaafachaa jiruun akka wal gituutti kan gadhiifameedha. Haasaa daangaan itti hojjatamee dubbatameedha. Hojiin argisiisamuu akka hin danda’amneetti walii galamee kan haasa’ameedha. Kun kaayyoo fi gocha wayyaanee ta’uu fi garuma fuulduraattu haasaan akkasii akka qalbii isin hin bunneef, karoora wayyaaneen gama kanaan qabduu isiniif dhaama.
Bara 2000 Obbo Mallasaan , barruu ABIYOOTAAWWII DIMOKIRAASII jedhu tokko baasanii ummata hammacaa turan. Barruun kun bifa lamaan qophaa’ee. Inni tokko kan ofii isaaniif qopheeffatan. Kana jechuun icitii hedduu qabu. Inni 2ffaa, kan ummati dubbisu ykn baratu. Yeroo sanatti, kooppii isa ofii isaaniif keewwatan keessaa namni naa baasee, dubbisee deebisuuf carraa argadheen ture. barruu gara fuula 340 keessaa waan fuula lamaan tokko irratti katabamee isiniif qooda. Barru Abiyootaawwii Dimokiraasii Fuula 232 irra. Mata dureen isaa, ABO dhabamsiisuu ykn Ummata Oromoo irraa adda kutuu jedha. Kana jalatti waan kana raawwachuuf, akka filannootti qabxii 21 ka’anii jiru. bara chaartaraa ABO Biyyaa baasuun eegaleera. Afaan Oromoo guddisuu, maqaa aadaan daldaluu kkf jechaa 21ffaa irratti waan ajaa’iibaa murtee isa dhumaa kaa’ee jira. Akkas jedha. Filannoo ABO gufachiisuu 20 tarrifnee kana milkeessuu dadhabnee Ummati Oromoo qabsoo isaatti jabaannaan, Waan ABOn Ummata kanaaf argamsiisuu fi Ummati Oromoo irra jireessa akka isa faana dhaabbatu kan taasisee, Hiree Murteeffannaa waan ta’eef, ABOf ammoo carraa kana gonkumaa laachuun waan hin danda’amneef, carraa kana OPDOn akka raawwattu goonaa jedhee, Ummati kun yoo foxxoquu murteeffatellee OPDO jalatti ta’uu qabaa jedhaa. Isa boodas Oromiyaa karaa OPDO saamuuf kaa’anii jiru.
Murteen kun isaaniif waan taphaa miti. wayyaaneen isa Lammaan har’aa haasa’ee miti, dantaa isheef kana caalaa akka gootuu beekuutu nu barbaachisa. shira kanallee hojjattee bakka yaaddee ga’uuf karoorfattee jirtii haasaa Lammaatti hin raajamiinaa. Qabxiilee wayyaaneen keewwattee keessa, namoota qaroo ta’aan dhabamsiisuu ykn Biyyaa baasuu kan jedhullee jira. Wayyaaneen karoora yeroo dheeraa fi gabaabaa keewwattee dhaloota nurratti guddisaa jirtii, waan yeroon uumuun hammacamuu dhiifnee, waan guddaa haa yaannu.
OMN FI XUMURA ISAA ! PIROJEKITII OMN FI TV OROMIYAA WAYYAANEE KAN HOJJATEE NAMA TOKKO TA’UU BEEKTUU ?
ATILAANTAA YKN HOGGANOOTA QABSOO FI XUMURA ISAANII AKKASUMAS, OPDO nni MAALIIF ACHITTI HEDDUMMAATAN ?
Barru kiyya kutaa 2ffaa keessattin qabadhee dhihaadhaa .
« New- Hawwisoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ebla 6,2016
ONN : Qophi Kayyoo”Marii dirmmannaa qabsoo Bilisummaa Oromoo “ »